Apple MacBook | ငါက Mac ပါ
မတ်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၅ မတ်လ ၉ ရက်ကို MacBook အသစ်စတင်မိတ်ဆက်ရန်သတိရလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ Apple ကွန်ပျူတာအသစ်၏အမည်မှာ MacBook.
ကျွန်တော်တို့ဟာ Apple ရဲ့လက်တော့ပ်ကိုတကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့တိုင်းတာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပါးလွှာတဲ့ MacBook Air ထက်သာလွန်တဲ့ယနေ့အထိလူသိများတဲ့အပါးလွှာဆုံး Mac ကိုရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ပြောနိုင်တယ်။ ဒီ MacBook မှာရှိတယ် ၁၃.၁ မီလီမီတာအထူရှိပြီး ၀.၉ ကီလိုဂရမ်သာရှိပြီး ၁၂ လက်မ Retina Display ပါရှိပါတယ် အသုံးပြုသူများကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်
ဤ Macbook များတွင်နောက်ထပ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုမှာ Force Touch ပါ ၀ င်သည်။ ဤ trackpad အသစ်သည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအပေါ်တစ်သားတည်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ဖိအားကိုသိရှိရန်အာရုံခံကိရိယာအသစ်များကိုထည့်သည်။ ၉ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် အက်ပဲလ်ကိုယ်တိုင်နှင့်အသစ်နှင့်အရသိရသည် တစ်ခုတည်းကို USB-C ကိုဆိပ်ကမ်းကို ဒီ MacBook အသစ်ရဲ့အသေးစိတ်အချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Apple က screen ၏နောက်ဘက်ရှိ backlit logo ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည်လက်ရှိ iPads များနှင့်အလွန်ဆင်တူပြီးအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေရောင်၊ အာကာသမီးခိုးရောင်နှင့်ရွှေ.
ဒီနေရာမှာ Apple MacBook အသစ်အကြောင်းနေ့စဉ်ထွက်လာတဲ့သတင်းအားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ်။
MacBook Pro ဖန်သားပြင်များသည် သုံးစွဲသူနှင့် အလိုအလျောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။
por Manuel Alonso ၊ လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
အကယ်၍ Apple မူပိုင်ခွင့်အားလုံး အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါက၊ ကွန်ပျူတာများထက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဉာဏ်ကြီးရှင်ငယ်များကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပြဿနာအားလုံးကို ကာမိဖို့ Apple လို ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို တော်တော်များများက သတိမထားမိကြပါဘူး။
por Manuel Alonso ၊ လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
MacBook Air သည် ခေတ်နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းပြန်လည်မွမ်းမံထားရန် မျှော်လင့်ရသည်။ အပါးလွှာဆုံး မော်ဒယ်နှင့်...
Apple သည်ယခုနှစ်စျေးကွက်တွင် ARM laptop စုစုပေါင်း၏ ၈၀% ကိုရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်
Apple Silicon Macs ခေတ်သစ်အတွက် Apple ၏ကတိကဝတ်သည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
Apple သည် ၁၂ လက်မ MacBook ကိုပြန်ဖွင့်ရန်စဉ်းစားနေလိမ့်မည်။ ၎င်းကို ၂၀၁၅ တွင်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ...
သုံးစွဲသူများစွာသည် Apple Silicon MacBook အသစ်များတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောမျက်နှာပြင်ကွဲခြင်းများကိုအစီရင်ခံသည်
သုံးစွဲသူများစွာသည်၎င်းတို့၏ MacBooks များနှင့်လူမှုကွန်ရက်များပေါ်တွင်တူညီသောပြသနာကိုအစီရင်ခံကြသည်။ မျက်နှာပြင်မကွဲဘဲ ...
၁၂ လက်မ MacBook သည် Apple ၏ "Vintage" စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်
por Jordi Gimenez လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
Cupertino ကုမ္ပဏီသည် MacBook Retina ကိုသာ ...
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
mini-LED display ပါ ၀ င်သည့် ၁၂.၉ လက်မ iPad Pro ကိုအသုံးပြုသူများစွာသည်ဆိုက်ရောက်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
MacBook တွင် butterfly keyboard ထည့်သွင်းမှုအတွက်အက်ပဲအားပထမတန်းစားအရေးယူခြင်း
por Manuel Alonso ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
လိပ်ပြာကီးဘုတ်သည်ဆက်လက်ပြောဆိုရန်အတွက်အလွန်ဆိုးရွား (ပြီး) ဖြစ်သည်။ ဒါ…
por Manuel Alonso ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
ကျွန်ုပ်တို့ MacBook ပိုင်ရှင်များအနေနှင့်အကြီးမားဆုံးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာ (မည်သည့်လက်တော့ကိုမဆိုစဉ်းစားသည်၊ အထူးသဖြင့် ...
ယုတ္တိဗေဒသို့မဟုတ်ရှင်းပြချက်မရှိသောအရာရှိပါသည်။ မနေ့က Apple ကတင်ပြချက်သုံးခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။